YSX welcomes the sixth listed company | Myanmar Business Today
HomeBusinessYSX welcomes the sixth listed company
YSX welcomes the sixth listed company
After nearly four andahalf years of operation, the Yangon Stock Exchange welcome the sixth listed company as Ever Flow River Group Public Co., Ltd. (EFR) held its listing day program on May 28.
The company successfully launched its first listing day with its trading volume reaching 31,196 shares worth K84.763 million on May 28.
Unfortunately, the trading volume dropped to 5,040 on May 29 and 75,05 on June 1.
The closing price of Ever Flow River Group Public Co., Ltd (EFR) day was K2,700 per share and jumped up 17.39% above its based price on the first trading day.
“Stock market is important for the country’s economy. Now Yangon Stock Exchange has only six listed companies. We hope it will have more listed companies in the coming years making the stock market here become more active. We want to see more companies be listed at the YSX and encourage them to try to list,” U Maung Maung Oo, Vice Chairman of Ever Flow River Group Public Co., Ltd, told Myanmar Business Today.
EFR with7Subsidiaries, 1 Affiliate, and2Project Companies is an investment holding company that owns shares in its business units and companies that are engaged in some diverse businesses. Its core businesses are in the logistics industry. EFR has also invested in companies that are engaged in logistics infrastructure development.
Government officials clap during the opening ceremony of the Yangon Stock Exchange center in Yangon December 9, 2015. There won’t be any bell-ringing or celebratory confetti explosions when Myanmar opens its new stock exchange this week. There won’t be any stocks to trade either. As Myanmar adjusts to the dizzying pace of its economic reforms and plays catch-up with Asia’s high-growth frontier markets, its bid to thrustaonce military-run backwater into the global marketplace might bealittle premature. REUTERS/Soe Zeya Tun
According to the document provided to the Yangon Stock Exchange, the company started with 19,977,223 outstanding shares (as at 31 st Jan 2020) worth over K13.638 billion.
On the day of FER’s first listing, the total trading volume at the Yangon Stock Exchange reached 46,861 shares, of which FER’s the highest followed by Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd. with 10,063 shares, First Myanmar Investment Public Company Limited with 3,818, TMH Telcom Public Co., Ltd. 1,523, First Private Bank Ltd. 207, and Myanmar Citizens Bank Ltd. 54.
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း စတင်လည်ပတ်ပြီး လေးနှစ်ခွဲနီးပါးကြာပြီးနောက် မေလ ၂၈ ရက်တွင် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၌ ဆဋ္ဌမမြောက်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် Ever Flow River Group Public Co., Ltd. (EFR) က အစုရှယ်ယာများ စတင်ရောင်းချခဲ့ပသည်။
ပထမဆုံးနေ့တွင်ပင် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာပေါင်း ၃၁၁၉၆ ခု၊ တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ် ၈၄ဒသမ၇၆၃ သန်းဖိုး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် မေလ ၂၉ ရက်တွင်တော့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အစုရှယ်ပေါင်း ၅၀၄၀ သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇွန်လတစ်ရက်တွင်တော့ အစုရှယ်ယာပေါင်း ၇၅၀၅ ခုသာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးစတင်သည့်နေတွင် အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ကျပ် ၂၇၀၀ ဖြင့် ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီး မူရင်း အခြေခံဈေးနှုန်းထက် ၁၇ဒသမ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။
“နိုင်ငံစတော့ဈေးကွက်က နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတယ်။ အခု ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းမှာ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ခြောက်ခုရှိလာပြီ။ လာမယ့်နှစ်တွေမှာ စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတွေ ပိုများလာပြီး စတော့ဈေးကွက်လည်း ပိုပြီး သွက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ နောက်ထပ်လည်း တခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းမှာ စာရင်းဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်” ဟု Ever Flow River Group Public Co., Ltd မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်ဦးက Myanmar Business Today ကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသို့ တင်ပြထားသော စာရွက်စာတမ်းများအရ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာပေါင်း ၁၉၉၇၇၂၂၃ ရှယ်ယာရှိပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ ကျပ် ၁၃ဒသမ၆၃၈ ဘီလီယံကျော်ရှိနေသည်။
FER က စတော့ရှယ်ယာများ စတင်ရောင်းချသည့်နေ့တွင် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အစုရှယ်ယာပေါင်း ၄၆၈၆၁ ခု အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် FER၏ စတော့ရှယ်ယာများ အများဆုံး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအလိုက် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုတွင် MTSH က အစုရှယ်ယာပေါင်း ၁၀၀၆၃ခု၊ FMI က ၃၈၁၈ ခု၊ TMH က ၁၅၂၃ ခု၊ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်က ၂၀၇ ခု၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်က ၅၄ ခုတို့ အသီးသီး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Previous articleEmirates could take four years to resume flying to entire network
Next articleMAI flies its first relief flight to Australia